Guddoomiye Ku xigeenka aqalka sare oo ganafka ku dhuftay sharci muhiim ah – Maanta Online
Sanatar Abshir Axmed Bukhaari oo ka mid ah Sanatarrada aqalka sare ee Golaha Baarlamaanka ayaa khudbad aan caadi aheyn waxa uu ka jeediyay xarunta golahaasi oo looga doodayay sharci ku saabsan arrimaha warbaahinta, isagoona sheegay in qaar ka mid ah qodobadaasi ay u muuqdaan kuwo aan ka tarjumeyn xorriyadda saxaafadda.
Sanatarka oo ah guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha aqalka sare ayaa sheegay in qaar ka mid ah qodobada ay yihiin kuwo u baahan in dib u eegis lagu sameeyo, sida qeexitaanka baraha bulshada, websityada gaarka loo leeyahay iwm.
“Sharcigaan waxaa ka muuqata in weriyihii la rabo dowladdu aqoonsi siineyso” ayuu yiri guddoomiye Ku xigeen Abshir Bukhaari oo ka hadlayay qodob ka mid ah sharcigaasi oo qeexayay warbaahinta xorta ah iyo kuwa qaranka.
Abshir Bukhaari oo khudbad u jeedinayay guddiga arrimaha Saxaafadda dalka oo dowladda federaalka hor dhigtay Golaha Baarlamaanka si ay u ansixiyaan sharcigaasi muhiimka ah.
Dhinaca kale Sanatarka ayaa ku taliyay in guddiga looga baahan yahay inaysan ku degdegin ansixinta sharcigaas, isagoo ku eedeeyay Dowladda Soomaaliya inay dooneyso saxaafad aan ka tarjumeyn danaha xorriyadda, madax bannaanida saxaafadda iyo qaabka ay u maareyneyso baraha bulshada iyo qodobo kale.
Sanatar Abshir Bukhaari oo asal ahaan aqoon buuxda u leh howlaha warbaahinta ahna milkiilaha Radio Goobjoog, isagoo ka soo shaqeeyay warbaahinta gudaha iyo tan caalamka, wuxuuna isagoo guddoomiye ku xigeen ka ah golahaasi u ololeynayaa sidii ganafka loogu dhufan lahaa sharcigaasi.
← UK Somalis ‘racially profiled’ over FGM
Qubanaha wararkii ugu dambeeyay Iran (Tallaabo dhif & naadir ah) →